Afhayeenka maamulka gobolka Axmaarada ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay afagambigii dhicisoobay – Xeernews24
Afhayeenka maamulka gobolka Axmaarada ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay afagambigii dhicisoobay
Afhayeenka maamulka gobolka Axmaarada ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay afagambigii dhicisoobay ee Sabatini. Afhayeenka ayaa sheegay in tiro dad ah ay ku dhinteen falka oo uu hogaaminay madaxii hogaanka nabadgalyada ee gobolku. Wuxuu sheegay in ugu yaraan 13 qof oo kale ay ku naf waayeen afgambiga, laakiin faahfaahin kama bixin inay ciidan ama shacab yihiin.
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidan kamid ah booliska gobolku ay weerareen xaruunta booliska iyo xaruunta xisbiga haya talada oo ah goobtii lagu dilay madaxda kililka Axmaarada.
Warbixinta ayaa lagu xusay inay falaagado isku deyday inay kasbato ciidamo balse ay ku hunguubeen. Waxaa kale oo ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan xaruunta warfaafinta ee gobolka oo ah meesha laga hago TV-ga, idaacada iyo warbaahinta kale ee afka dawlada gobolka ku hadla.
Waxaa muuqata in falaagadu la kulantay iska caabin kaga timid ciidanka dawlada gobolka taabacsan. Khasaaraha hardanka ayaan wali soo wada bixin iyada oo laga yaabo inuu intaa ka bato.
Madaxdii lagu dilay mashaqadii Bahir Dar iyo Addis Ababa ayaa maanta lagu kala aasay Bahir iyo Maqale. Aaska Bahir Dar ayaa amaankiisa aad loo adkeeyay iyada oo la sheegay inay ka qayb-galeen xaaska Abiy Ahmed, Ra’isulwasaare ku-xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibada oo horay u ahaan jiray madaxweynaha maamulka Axmaarada. Wufuud kasocda Eritrea iyo Sudan ayaa iyaguna kasoo xaadiray madasha.
Demeqe Mokonnon ayaa sheegay in amaanka, sharciga iyo kala danbayta lasoo celin doono.
Magaalada Maqale ayey isugu soo baxeen kumaakum qof oo ka qayb-galay aaskii taliyiihii ciidamada Ethiopia iyo jeneral saxiibkii ah oo hawlgab ahaa.
Dhalinyaro cadhaysan ayaa dilka labada jenaraal ku eedeeyay xukuumada abiy, laakiin madaxda sare ee maamulka Tigreega ayaan farta ku fiiqin dawlada. Taliyaha waaxda galbeedka ee ciidamada qaranka, oo munaasabada ka hadlay, ayaa sheegay in qoomiyadnimadu ayna qaybin doonin oo ay midaysan yihiin.
Dawlada ayaa afgambiga ku eedeysay Asamnew Tsige oo ahaa madaxii hogaanka nabadgalyada gobolka oo lagu dilay hawlgal ay ciidanka iskaga hor yimaadeen. Waxaa jira xogo sheegaya in meydka Tsige lagu wareejiyay qoyskiisa oo degan magaalada Leilibala ee gobolka Axmaarada.
Dadweynaha Ethiopia ayaa wali fahmi la‘ sey wax u dhaceen iyaga oo aad uga argagaxay falka. Waxaa jira warbixino tilmaamaya in Tsige u haystay taageero badan. Wakaalada Reuters ayaa waraysatay dhalinyaro diiday inay is muujiyaan oo sheegay in Asamnew ahaa badbaadiyaha Axmaarada. Waxay sheegeen in Axmaarada lagu laynayo goob kasta oo dalka ah. Dareen kaa lamid ah waxaa qabay Tsige oo meel fagaare ah ka sheegay in qoomiyada Axmaaradu aad isu hubayso si qoomiyadaha kale dagaal ula gasho
Afgambiga ayaa shaki weyn iyo madmadow soo dhaxgalin kara Axmaarada iyo Oromada oo isu kaashaday kacdoonkii Tigreega talada lagu weydaariyay. Waxaa horay labadan qoomiyadoodba uga walaacsaana Tigreega.
Dhanka kale, 6 qof ayaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taal Addis Ababa. Waxaa dhamaantood lagu eedeeyay fal argagixiso ah oo la xidhiidha afgambigii Bahir Dar. Saddex kamid ah eedeysanayaasha ayaa kamid ah golle uu dhowaan dadka Addis Ababa u aasaasay suxufiga Eskinder Nega oo aad dawlada u dhaleeceeya. Eskinder ayaa kamid ah maxaabiistii dawladu Abiy sii deysay. Gollaha oo la dhaho Baladera Council ayaa ku dooda inuu u taagan yahay danaha reer Addis Ababa, haseyeeshe waxaa jira dad ku doodaya inay gollaha ka danbeeyaan dad leh dano siyasadeed oo waliba u dhow kooxaha xagjirka ah ee Axmaarada.
Dalka ayaa wali ku jira xaalad kala-guur ah oo ay adag tahay inla saadaliyo dhinaca looga ruqaansan doono.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/Amxaaro-.jpg 502 1068 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-26 21:48:462019-06-26 21:56:18Afhayeenka maamulka gobolka Axmaarada ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay afagambigii dhicisoobay
(Daawo Sawirro) sidda quruxda badan iyo xuska Munaasabada 26-ka Juun ee magaalada... Jabuuti oo maanta u dabaal degtay xuska 42 guuraddi xoriyadda dalka(Video&...